English: Ethiopian calendar
Ny tetiandro etiopiana dia tetiandro ampiasaina ao Eritrea sy ao Etiopia. Nifototra tamin'ny tetiandro kopta ny fandrafetana azy, nefa ampiana andro iray isaky ny efa-taona izy, sahala amin'ny tetiandro joliana, ary manomboka amin'ny 11 Septambra amin'ny tetiandro gregoriana ny taona aminy.
ny volana ao amin'ny tetiandro etiopiana
Sahala amin'ny tetiandro kopta ny tetiandro etiopiana izay ahitana volana roa ambin'ny folo misy 30 andro avy miampy dimy na enina andro fanampiny (izay atao hoe volana faha-13), nefa ny anaram-bolana dia amin'ny fiteny amharika. Ny andro fahenina fanampiny dia atovana isaky ny efatra taona amin'ny 29 Aogositry ny tetiandro joliana, enim-bolana alohan'ny andro fanampin'io tetiandro joliana io (amin'ny faran'ny volana Febroary). Noho izany, ny taom-baovao etiopiana amin'ny voalohan'ny volana Mäskäräm dia ankalazaina amin'ny 11 Septambran'ny tetiandro joliana rehefa atovana ilay andro fahenina. Ho an'ireo taon'ny tetiandro gregoriana eo anelanelan'ny 1901 sy 2099 dia mifanandrify amin'ny 11 sy 12 Septambra izany.
Raha manondro daty ny Etiopiana tany amboalohany dia nampiasa ny Vanimpotoan'ny Fahatongavana ho Nofo, izay namaritra ny datin'ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo amin'ny 25 Marsa tamin'ny taona 9 amin'ny fanisan-taona kristiana manaraka ny tetiandro joliana (nosafidin'i Anianosy avy any Aleksandria tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-5). Ny taona voalohany amin'ny tetiandro tsotra (tsy momba ny fivavahana) dia manomboka fito volana mialoha, amin'ny 29 Aogositra tamin'ny taona 8 amin'ny tetiandro joliana, izany dia niteraka elanelana valo taona amin'ny fanisan-taona gregoriana tamin'ny 1 Janoary hatramin'ny 10 Septambra, avy eo elanelana fito taona ho an'ny taona gregoriana hafa rehetra.
Taloha anefa dia nisy fanisan-taona maro hafa koa nampiasaina. Ny iray amin'izy ireo dia ilay atao hoe Anno Mundi ("Taonan'izao tontolo izao."), izay mametraka ny andron'ny famoronana ho amin'ny taona 5492 tal. J.K. Nisy koa ny Anno martyrum ("Vanimpotoan'ny Martira") izay amin'ny ankapobeny manomboka amin'ny taona 284 amin'ny fanisan-taona kristiana (29 Aogositra 284 amin'ny tetiandro joliana). Nisy fomba roa hafa namaritana ny daty izay fantatra nefa tsy tena nampiasaina ho fomba fanisan-taona feno, dia Taom-Pahasoavana, izay miorina amin'ny tsingerina 532 paska mifanarakaraka, sy ilay fomba afototra amin'ny fitandaharan'efa-taona antsoina amin'ny anaran'ireo Evanjely: Matio, Marka, Lioka ary Joany.